गीतको लय चोरी, इन्स्टाको फोटो « LiveMandu
गीतको लय चोरी, इन्स्टाको फोटो
१८ माघ २०७५, शुक्रबार ११:१४
नेपाली गीतहरुमा लय चोरी गरिने चलन पुरानै हो । दशकौं अगावै प्रकाश पौडेलको विदेशी गीतबाट साभार गरिएको नाँई मलाई त्यही केटि चाहिन्छ बोलको गीत देखि आई एम र बार्बी डलको लाग्यो बाढुली सम्म । एकताका निर्माता चिरञ्जीवी बस्नेतले बनाएका चलचित्रहरु जो च बाटै उच्चारण हुने नामबाट बन्दथे, ती चोर, चमत्कार लगायतका चलचित्रमा उनले भारतीय चलचित्रको छाँया कथा, पात्र अनि संगीत पनि हुबहु कपी गरिदिन्थे । अहिलेको समयमा कहिले अल्मोडा राना त कहिले कालीप्रसाद लगायतका बहुतै चलेका संगीतकारहरु पनि यो गीतको लय चोरी गर्ने दौडमा प्रष्टसंगले मुछिएका छन् । अब यो चोरी भन्ने या परिपेक्ष्यकरण या उत्प्रेरणा ? इन्स्टाको फोटो कालीप्रसाद बाँस्कोटा र आशिफ शाहको नेपाल आइडल सिजन २ पछिको वसिवियाँलो मात्र नभई जी २१ प्रोडक्शनको एउटा सुपरहिट गाना भयो, केहि हप्तामै ४०सौं लाख नेपालीले मनपराएको यो गीत अहिले आएर एउटा विदेशी गीतको हुबहु नक्कल भएको प्रमाणित भएको छ ।
एकजमाना थियो जब संकलकहरु गाँउगाँउमा गएर भाका साभार गर्दै गीत निकाल्थे र उनीहरुलाई रेडियो नेपालमा संगीतकार नभनी संकलक भनिन्थ्यो । धेरैवटा गीतहरुमा राम थापा, कुमार बस्नेत लगायतका बरिष्ठ नामहरु संकलकको सूचीमा पाइन्छ । अहिले नेपथ्य समुहका गायक अमृत गुरुगं गाँउगाँउमा गएर भाका टिपेर ल्याउने गर्दछन् । काली प्रसाद बाँस्कोटा एउटा श्रृजनशील संगीतकार हुन्, उनका हरेक गीतहरुमा केहि नौलोपना पाइन्छ तथापी केहि भाकाहरु साभार गर्न र रुचीपूर्ण लय जोड्न उनी खप्पीस पाइन्छन् । नेपाली मनमा रहेको पुराना गीत अनि लोकभाकाको आधुनिकृत स्वरुप उतार्न उनी खप्पीस छन् भन्ने धेरैको ठम्याइ छ ।
इन्स्टाको फोटो पनि कार्ला ब्रुनी नामक ईटालियन अनि फ्रेन्च सुपर मोडल र गायिकाको गीतको छाँयाप्रति भएको पाइएको छ ।
कार्ला ब्रुनीको गीत
अब इन्स्टाको फोटो सुनौं
गायिका ब्रुनीले सन् २००८ मा फ्रान्सका तत्कालिन राष्ट्रपती निकोलास साराकोजीसंग बिवाह गरेपछि उनी झनै चर्चामा आइन् । अहिलेसम्म उन्का ५० लाख एल्बुमहरु बिक्रि भइसकेका छन्, उनी निकै नै चर्चित छिन् । अहिले निकै समाजसेवी कार्यहरुमा संलग्न यिनी अहिले ५३ वर्ष हाराहारी कि भइन् ।
कालीप्रसाद बाँस्कोटाको गीत हुबहु यिनीसंग मिल्न जानु कुनै संयोग मात्र त पक्कै हैन ? नेपाली संगीतले विदेशी सर्जकहरुसंग उत्प्रेरणा लिन थालेको यो अर्को प्रमाण हो । तर निकै नाम चलेका राष्ट्रिय स्तरका सर्जकले समेत यसरी अन्य गीतहरु चोर्दा नेपाली दर्शकश्रोतको मन भनें समयसमयमा अमिलिने पक्का छ । के नेपाली मौलिक भाकाहरु सकिएकै हुन् र ? विदेशी गीत जस्ताका तस्तै चोरेर पस्किनलाई ?
के कालीप्रसाद लगायत अन्य आधुनिक संगीतकारले नेपाली दर्शक श्रोतालाई कम आँकेका हुन त ? यो यसरी गीत चोर्नु नेपाली सांगितिक नक्षत्रलाई नै अवमुल्यन गरिएको हो त ? विश्वमै बहुचचर्चित गीतहरुको सूचीमा रेशम फिरिरि लगायत अरुण थापाको रितुहरुमा तिमी पनि एकताका सुचिकृत भएको हो । नाचिदेउ मैच्यागं, तिम्रो त्यो आँखाको गहिराईमा वोलको नेपाली गीतलाई त बलिउडले मुलधारको चलचित्रमा राखेकै हो र उक्त गीत निकै हिट पनि भयो । ९० को शताव्दीको मध्यतिरै देवानन्दका केहि चलचित्रका गीतहरु नेपाली भाका र परिवेशका पाइन्छ, हरे रामा हरे कृष्णका गीतहरु देखि पछिल्लो दशकको लभ इन नेपालका गीतसम्म नेपाली संगितका छाँयाहरु छन् ।
अब यसरी भाका चोर्ने या सापट लिने सर्जकहरुलाई पनि संगितकार नभनी संकलक या छाँयाप्रतिकार पो भन्ने कि ?
अष्ट्रेलियाको रकडेलमा “NepGasm कमेडी नाइट शो” हुँदै
भनिन्छ हाँसो नै जिवनको एउटा ओखती हो जस्ले उमेर बढाउने काम गर्छ। नेपालीमा मात्र हैन अङ्ग्रेजीमा पनि भन्ने गरिन्छ “Laugh
नेपग्याजमको स्टेजमा कमेडी किङ “मनोज गजुरेल” को ‘ठाडै ठट्टा’
लोकप्रिय स्ट्याण्डअप कमेडी (Stand-UP) समूह नेपग्याजम (Nep-Gasm) ले मूर्दन्य हास्य कलाकार मनोज गजुरेललाई आफ्नो स्टेजमार्फत अतिथी प्रस्तोताको रुपमा सार्वजनिक गरेको